Syberia ကို Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချခဲ့သည် ငါက Mac ကပါ
Syberia များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 11,99 €နှင့်ကန့်သတ်အချိန်အဘို့ဖြစ်၏ လျှော့ချ 60% သာ 4,99 € သင့်ပိုင်ဆိုင်နိုင် နယူးယောက်မှရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်နုိုင်ငံရေးရှေ့နေကိတ်ဝေါ်ကာသည်အစပိုင်းတွင်မျှမျှတတရိုးရှင်းသည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ Alpine ချိုင့်ဝှမ်းရှိလျှို့ဝှက်အလိုအလျောက်စက်ရုံအဟောင်းကိုရောင်းချခြင်းကိုလျင်မြန်စွာရပ်တန့်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထိအိမ်သို့ပြန်သွားသည်။ ။ သင်ဤလုပ်ငန်းကိုစလုပ်သည်နှင့်အမျှ၊ သူ၏ဘ ၀ သည်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဥရောပမှတဆင့်သူ၏လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်းခရီးသွားလာ အနောက်ဥရောပမှရုရှားအရှေ့ဖျားဒေသအထိ, သင်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်သင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကောင်များနှင့်နေရာများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည် ပညာရှင် Hansအဆိုပါ အံ့ဖွယ်တီထွင်သူ (Syberia ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြရန်နောက်ဆုံးသော့ချက်) ။
သူသည်အချိန်နှင့်ကွဲပြားသောနယ်မြေများကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည် သင့်ရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုမေးခွန်းထုတ်လိမ့်မယ်, ထိုအချိန်ကသူ့ကိုခရီးစတင်ရန်သောသဘောတူညီချက်၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲစဉ်ကံကြမ္မာနှင့်အတူစာချုပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရုပ်ရှင် - စတိုင်ကင်မရာထောင့်များ, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘောင်။
Syberia သည်ရှည်လျား။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် အရည်အသွေးမြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်များ နှင့်ပါဝင်သည် အတွက်ဇာတ်ကောင်အပြည့်အဝ dubbing အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အီတလီ, español နှင့်ဂျာမန်။ ၎င်း၏တပ်ဆင်မှုအတွက်က သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်အနည်းဆုံး 2GB သိုလှောင်မှုနေရာရှိသည်.
တင်ပါတယ်: 27/02/2014 ။
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: microids © 2014 Anuman Interactive မှ။
compatibility: OS X 10.4 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်။
Livecad မှဆိုက်ဘာရီးယားကိုခံစားကြည့်ပါ 4,99 € နှင့်ထံမှခြွင်းချက်စျေးနှုန်းလျှော့ချရေးရ 60%!.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Syberia, Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချသည်